ရေဒီယို စတူဒီယို စက်ပစ္စည်း၊ ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်နှင့် လက်ခံကိရိယာ
ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ထောက်ပံ့မှု ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးကို အမြဲလုပ်ဆောင်ပါသည်။
ဒါတွေကို မင်းရှာနေတာလို့ ငါလောင်းတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာမျှဝေပါ လက်လီလက်ကားဆိုတာလဲ ရှိတယ်။ အားလုံး ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်။
သုံးစွဲသူများ၏ အမျိုးမျိုးသော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ရေဒီယို အသံလွှင့်ကိရိယာ အပြည့်အစုံကို တစ်သောင်းအထိ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင် မှာယူထားသော နံပါတ်များကို အခြေခံ၍ အပိုအပိုင်းအစများကို အနည်းငယ်သာ လက်လီလက်ကား ရောင်းချပေးပါသည်။ စကားမစပ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။ အမေဇုံ နှင့် ကို eBay ပြီးတော့ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ရာမှာ ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်။ ယခုအချိန်အထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝယ်ယူသူများသည် သန်းနှင့်ချီသော ပရီမီယံ အရောင်းအရင်းအမြစ်များမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနေပါသည်။ FMUSER ဖန်တီးမှုအားလုံး။ ထိုသို့သော ထိပ်တန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရောင်းကွန်ရက်ဖြင့် FMUSER သည် ဝယ်ယူမှုတွင် ဘတ်ဂျက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ထုတ်ကုန်များတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုနှင့် ဌာနခွဲရှိ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည့် ကွင်းဆက်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ၎င်း၏ဆန္ဒအတိုင်း ဆက်လက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုလေ့လာရန် >>
အောက်ပါစာရင်းတွင် ပါဝင်သူများ လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
1. ရောင်းရန် FM ရေဒီယို ဘူတာရုံ စက်ပစ္စည်း - စာရင်းအပြည့်အစုံကို ကြည့်ပါ။ ဒီမှာ
ရေဒီယိုစခန်း ပက်ကေ့ချ်များကို ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ - ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါရှိသော FM အင်တင်နာစနစ်များ အပြည့်အစုံ
FM အသံလွှင့်စက် ပက်ကေ့ချ် (ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်) — FM ရေဒီယိုစတူဒီယိုအတွက် ပက်ကေ့ခ်ျအပြည့်အစုံ - အသံပရိုဆက်ဆာမှ စတူဒီယိုစားပွဲအထိ၊ FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် စတူဒီယိုအသံလွှင့်စက်လင့်ခ်ကိရိယာ၊ STL အင်တင်နာ၊ STL အသံလွှင့်စက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ STL လက်ခံကိရိယာတို့ ပါဝင်သည်။
FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များ — ကီလိုဝပ်အဆင့်မှ ပါဝါအဆင့်အနည်းငယ်ရှိသော ရာဂဏန်းရှိသော FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု (Cabinet FM Transmitter) (AKA-Cabinet FM Transmitter) မှ ပါဝါအဆင့်အနည်းငယ်ရှိသော FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းအထိ
FM အသံလွှင့် အင်တင်နာများ — စက်ဝိုင်းပုံဝင်ရိုးစွန်းအင်တာနာ၊ မြေပြင်လေယဉ်အင်တင်နာ၊ FM dipole အင်တင်နာ၊ ကားရေဒီယိုအတွက် FM အင်တင်နာ၊ ပါဝါမြင့်မားသော FM transmitter အတွက် multi-bay FM အင်တင်နာ (3 bays၊4bays၊6bays နှင့် 8 bays တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်)။
2. တီဗီ ရေဒီယို စခန်း စက်ပစ္စည်း ရောင်းရန်
UHF&VHF တီဗီ ထုတ်လွှင့်မှု ထုတ်လွှင့်စက်များနှင့် အင်တင်နာများ
တီဗီရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနနှင့် တီဗီစတူဒီယိုအတွက် ပက်ကေ့ခ်ျအပြည့်အစုံ။
3. ရေဒီယို အင်ဂျင်နီယာ အခန်း စက်ပစ္စည်း ရောင်းရန်
RF စစ်ထုတ်မှုများ၊ RF ပုံမမှန်သောဝန်၊ စွမ်းအားမြင့် RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ၊ တင်းကျပ်သော ဂီယာလိုင်းများ၊ အင်တင်နာလှိုင်းလမ်းညွှန်ရေချိုးကန်များ စသည်တို့။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် "ရေဒီယိုအင်ဂျင်နီယာ- ရေဒီယိုစခန်း စက်ပစ္စည်းစာရင်းအပြည့်အစုံ".
4. စိတ်ကြိုက်အသံလွှင့်ဖြေရှင်းချက် - စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။ ဒီမှာ
Drive-in Church နှင့် Drive-in Theatre အတွက် ရေဒီယို ဘူတာရုံ ပက်ကေ့ဂျ်များကို အပြည့်အစုံ — ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအောက်တွင် ထိတွေ့မှုမဲ့ FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် FM အသံလွှင့်ကိရိယာများ၊ FM အင်တင်နာများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပြည့်အစုံပါရှိပါသည် (ထုတ်လွှင့်ထုတ်လွှင့်မှု၏ပါဝါအဆင့်သည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကွဲပြားသည်)။
All-in-one ရေဒီယို Turnkey ဖြေရှင်းချက် - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ် FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနနှင့် ကျွမ်းကျင်သူ တီဗီအသံလွှင့်ဌာနအတွက် လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူ အဆင်သင့် အသံလွှင့်ကိရိယာအစုံအလင်။
ဘတ်ဂျက်ဖြေရှင်းချက် — ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်း ပက်ကေ့ချ်၏ အစိတ်အပိုင်းများသာ လိုအပ်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဝယ်ယူသူများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ဖြေရှင်းချက်။
5. တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း ဖြေရှင်းချက်များ - စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။ ဒီမှာ
IPTV Hardware လွှင့်စက်များ — 1၊ 4၊ နှင့် 16 ချန်နယ်များ၊ IPTV ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းကုဒ်ဒါနှင့် ဒီကုဒ်ဒါပါရှိသော IPTV ဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်ဒါ
ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အပိုပစ္စည်းများ - မော်ဂျူး၊ ကင်မရာ၊ မိုက်ခရိုဖုန်း၊ နားကြပ်၊ စသည်ဖြင့်။
ရေဒီယို အသံလွှင့်ကိရိယာအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရောင်းကွန်ရက်
တစ်ဦးအဖြစ် ရေဒီယို အသံလွှင့်နယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်သူ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်များကို ကုန်ကျစရိတ်၊ အရည်အသွေးနှင့် ပမာဏတို့ဖြင့် အပြည့်အဝ လွှမ်းခြုံနိုင်ပါသည်။ ရုပ်သံလွှင့်စက်များတွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရေဒီယိုအသံလွှင့်လိုအပ်ချက်ပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ကို အောင်မြင်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သော စက်ရုံများ (တရုတ်နိုင်ငံ၌ ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာများ ရှိပါသည်)၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြိုင်ဆိုင်မှု မြင့်မားပါသည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သော နိုင်ငံပေါင်း 200 ကျော်မှ သုံးစွဲသူများအတွက် ခိုင်မာသော ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပေးသည့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပစ္စည်းအရည်အသွေး ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ။
ရိုးရှင်းစွာသင်ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ အပြည့်အစုံ or ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များ ရောင်းရန်ရှိသည်။သေချာအောင်လုပ်ပါ FMUSER အသံလွှင့်ဌာနသို့ ဆက်သွယ်ပါ။; အကယ်၍ သင်သည် အသံလွှင့်စက် လက်ကားလုပ်ငန်း (ဥပမာ- အသံလွှင့်စက်များ၊ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ စသည်တို့) ကို ရှာဖွေနေပါက၊ ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲနားထောင်နေပါသည်။
သင်သည် ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံများမှ ဖြစ်ပါသလော။ အတူတူအလုပ်လုပ်ကြပါစို့
အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ အန်ဒိုရာ၊ အန်ဂိုလာ၊ အန်တီဂွာနှင့် ဘာဘူဒါ၊ အာဂျင်တီးနား၊ အာမေးနီးယား၊ ဩစတေးလျ၊ သြစတြီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘဟားမား၊ ဘာရိန်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘာဘေးဒိုးစ်၊ ဘီလာရုစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ ဘီလီဇ်၊ ဘီနင်၊ ဘူတန်၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ဘရူနိုင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဘာကီနာဖာဆို၊ ဘူရွန်ဒီ၊ ကာဘိုဗာဒီ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ကင်မရွန်း၊ ကနေဒါ၊ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ ချဒ်၊ ချီလီ၊ တရုတ်၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကိုမိုရော့စ်၊ ကွန်ဂို၊ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်ဂို၊ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကော်စတာရီကာ ၊ Côte d'Ivoire၊ Croatia၊ Cuba၊ Cyprus၊ Czech Republic၊ Denmark၊ Djibouti၊ Dominica၊ Dominican Republic၊ East Timor (Timor-Leste)၊ Ecuador၊ Egypt၊ El Salvador၊ Equatorial Guinea၊ Eritrea၊ Estonia၊ Eswatini၊ Ethiopia၊ ဖီဂျီ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂါဘွန်၊ ဂမ်ဘီယာ၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ဂျာမနီ၊ ဂါနာ၊ ဂရိ၊ Grenada၊ Guatemala၊ Guinea၊ Guinea-Bissau၊ Guyana၊ ဟေတီ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိုက်စလန်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ အိုင်ယာလန်၊ အစ္စရေး အီတလီ၊ ဂျမေကာ၊ ဂျပန်၊ ဂျော်ဒန်၊ ကာဇက်စတန်၊ ကင်ညာ၊ ကီရီဘာတီ၊ ကိုရီးယား၊ မြောက်၊ ကိုရီးယား၊ တောင်၊ ကိုဆိုဗို၊ ကူဝိတ်၊ကာဂျစ်စတန်၊ လာအို၊ လတ်ဗီးယား၊ လက်ဘနွန်၊ လီဆိုသို၊ လိုက်ဘေးရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ လစ်ချ်တင်စတိန်း၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ လူဇင်ဘတ်၊ မဒါဂတ်စကာ၊ မော်လဝီ၊ မလေးရှား၊ မော်လ်ဒိုက်၊ မာလီ၊ မော်လ်တာ၊ မာရှယ်ကျွန်းများ၊ မောရီတေးနီးယား၊ မောရစ်ရှပ်စ်၊ မက္ကဆီကို၊ မိုက်ခရိုနီးရှား၊ Federated States of, Moldova၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ မွန်တီနီဂရိုး၊ မော်ရိုကို၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ မြန်မာ (မြန်မာ)၊ နမီးဘီးယား၊ နောရူ၊ နီပေါ၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ နီကာရာဂွာ၊ နိုင်ဂျာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ မြောက်မက်စီဒိုးနီးယား၊ နော်ဝေး၊ အိုမန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ပါလူ၊ ပနားမား၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ ပါရာဂွေး၊ ပီရူး၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ကာတာ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ရုရှား၊ ရဝမ်ဒါ၊ Saint Kitts and Nevis၊ Saint Lucia၊ Saint Vincent and the Grenadines၊ Samoa၊ San Marino၊ Sao Tome and Principe၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဆီနီဂေါ၊ ဆားဘီးယား၊ Seychelles၊ Sierra လီယွန်၊ စင်ကာပူ၊ စလိုဗက်ကီးယား၊ စလိုဗေးနီးယား၊ ဆိုလမွန်ကျွန်းများ၊ ဆိုမာလီယာ၊ တောင်အာဖရိက၊ စပိန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဆူဒန်၊ ဆူဒန်၊ တောင်၊ ဆူရီနမ်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဆီးရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ ထိုင်း၊ တိုဂို၊ တွန်ဂါ၊ ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို တူနီးရှား၊ တူရကီ၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်၊ တူဗာလူ၊ ယူဂန်ဒါ၊ ယူကရိန်း၊ အာရပ်အီး Mirates၊ United Kingdom၊ United States၊ Uruguay၊ Uzbekistan၊ Vanuatu၊ Vatican City၊ Venezuela၊ Vietnam၊ Yemen၊ Zambia၊ Zimbabwe။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်ကိရိယာများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခွင်ရှိ အသံလွှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ်အုပ်စုများကိုမဆို အကျိုးရှိမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒေသတွင်း အေးဂျင့်များဖြစ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက သို့မဟုတ် ခိုင်မာသောရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးအတွက် တက်ရောက်နေပါက၊ FMUSER အသံလွှင့်ခြင်း။ကြကုန်အံ့ Business Talk လုပ်ပါ။ အခုပဲ!
ကျွန်ုပ်တို့သည် FMUSER အသံလွှင့်ရုံနှင့် အတူရှိနေသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုအသံလွှင့်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုအပေါ် အမြော်အမြင်ရှိရှိ လှမ်းကြည့်နိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အလားအလာရှိသော ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသော မိတ်ဆွေများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပိုမိုထိတွေ့ခွင့်ရရန် အမြဲတောင့်တနေသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းပြပွဲအချို့တွင် အမြဲပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Canton Fair၊ HKEF၊ CCBN စသည်ဖြင့်၊ Hong Kong Electronics Fair 2012 (Autumn Edition) ပြပွဲအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြခန်းတွင် အောက်ပါပုံများကို ရိုက်ကူးထားပါသည်။
HKEF 2012 တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ FM အသံလွှင့်စက်များကို ပြသခွင့်ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
"ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လွှင့်မှုထုတ်ကုန်များနှင့် ပထမဆုံး အကြိမ်၊ စိတ်မပူပါနှင့် ဆရာ၊ မိနစ်အနည်းငယ်သာ ကြာပါသည်။"
FMUSER မှ FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို အပြင်ဘက်တွင် ပြသထားသည်။
"၎င်းသည် FM ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုသာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် FMUSER အသံလွှင့်မှ FM အသံလွှင့်စက်ဖြစ်သည်။
အမှတ်တံဆိပ်၏ အသိအမြင်ကို မြှင့်တင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ပိုမိုထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
Asia World-Expo - HKEF 2012 တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံး ပြပွဲရှိသည်။